Izindaba Zomthengisi we-EA ukubuyekeza - Best Forex EA's | Iseluleko Abeluleki | FX Amarobhothi
IkhayaI-News Action trader EAI-News Action trader EA ukubuyekeza
BEST Forex EA'S | UCHWEPHESHE abeluleki | FX amarobhothi I-News Action trader EA 2
Price: I- $ 347 (INDLELA EYODLULWA NGESIKHATHI, ISIKHATHI SEKUPHAKATHI, IMIHLAZIYO YAMAHHALA NOKUSEKELA OKUGCWELET)
Currency ngababili: I-AUDJPY, i-AUDUSD, i-GBPUSD, i-NZDUSD, i-USDCAD kanye ne-XAUUSD (Igolide)
Qaphela: Kunamaphakeji e-2 ahlukile weNews Action trader Umeluleki wobuchwepheshe atholakalayo okwamanje:
- UHLELO LOKUKHOKHA IMALI NGENXENYEX ye-2: Ibhukwana elinemininingwane, izibuyekezo zamahhala nokuxhaswa kwabathengisi, intengo ejwayelekile: $ 247 ngenyanga
- UHLELO LOKUPHILA OLUNYE LESIKHATHI: Ibhukwana elinemininingwane, izibuyekezo zamahhala nokuxhaswa kwabathengisi, intengo ejwayelekile: $ 397 - Gcina i- $ 97!
KUBALULEKILE: Uzothola i-News Action trader EA ne-News Feed Software kanye nezilungiselelo ezinhle kakhulu!
I-News Action trader EA Ukubuyekezwa - Iseluleki Esizuzisayo Sokuthengisa Kwamabhizinisi
I-News Action trader EA inamandla kakhulu futhi inokwethenjelwa FX Expert Advisor nohlelo lokuthengisa izindaba oluzenzakalelayo olwenziwe ngumhwebi osezingeni elifanele UMikhail Zaprudin.
UMikhail wayevame ukuba ngunjiniyela owathuthukisa izindlela zokuhweba zesikhathi sangempela ezithembeke kakhulu zeziteshi zamandla cishe iminyaka ye-5. Wenze nabacebisi abaningi be-Expert for Metatrader 4 (MT4) kanye ne-Metatrader 5 (MT5) namapulatifomu. Lesi yisistimu yakhe ephumelela kakhulu futhi enobuhlakani.
Ngomklamo wawo owedlule, ubuchwepheshe bokuphumelela kanye nejubane elimangalisayo, I-News Action trader EA ukuphela kwendlela okufanele uhwebe ngayo izindaba. Isebenzisa imininingwane yezomnotho yesikhathi sangempela evela emthonjeni wezindaba onokwethenjelwa (i-Forex Factory - I-Forex Khalenda) futhi ivule ngokuzenzakalelayo, ilawule, futhi ivale ukuhweba - ngokuphelele kumshayeli we-auto.
I-News Action trader EA -Usebenza Kanjani Lo Umeluleki Wokusebenza Ngokuzenzakalelayo We-Forex Osebenza Ngokuzenzakalelayo
Wake wahlala, wabuka amashadi okuhweba futhi wabona ama-spikes amakhulu phezulu, phansi, noma ngisho kuzo zombili izinkomba ezinje?
Nali iqiniso: ungenza ithani lemali uma uhweba ngalezi zindaba futhi uzenze kahle!
Kepha udinga ukukhulisa ubuchwepheshe, njengoba usebenzisa isoftware engafinyelela isivinini, ngenkathi usebenzisa isu elisebenzayo lokuthwebula wonke amadola wenzuzo kulezo zindaba.
I-News Action trader EA - Ingaphezu Kokwenza nje Uhlelo Olula Lokuhweba
Njengoba kungenzeka wazi, uma unesipiliyoni sokuhweba, kuphakama inkinga evela ezindabeni zokuhweba ukuhlunga futhi isakazeka ukunwebeka. Lokhu yilokho okwenza ukuthi izinhlelo eziningi ze-scalping nezinhlelo zezindaba zehluleke. Kepha hhayi le EA.
I-News Action trader EA inecebo eliyingqayizivele elenza ukusatshalaliswa nokwenqatshwa kwezentengiselwano futhi lizoguqula ngokulingene izilinganiselo zokuhweba futhi liyeke ukulahleka ngokusekelwe kokuguquguqukayo kokubili okuqinisekisiwe ukuthi imisebenzi yakho ivikelwe. Kwezinye izimo, kungamisa futhi kumane kukhansele ukuhweba uma izimo zingalungile ngokuphelele.
Uke wezwa ngakho iziswebhu? Lokhu kungaba umbulali we-akhawunti kumthengisi ongenalwazi. Ama-Whipaws ayizinto zasendulo ezenzweni yentengo ezingenza ukuthi ukuhweba noma imisebenzi yakho kumiswe ukulahleka okukhulu, ngaphambi kokuya endaweni efanele. Kuyisenzo sentengo ngokuqinile esonyuka phezulu lapho phansi noma okuphambene nalokho ngendlela engenza ukuthi abathengisi bavale ngokulahleka, lapho bebezovala ngokunqobayo. Futhi ukuthatha abathengisi abaningi ngasikhathi sinye.
I-News Action trader EA inezivikelo endaweni yokuvikela nokuthola inzuzo ezimeni eziningi kuma-whipaws.
Isici esibaluleke kakhulu silungile isikhathi. Uma uhlela ukuhweba maduzane, khona-ke ungabafaka engcupheni yokudala ngaphambi kokuthi isenzo siqale ukudala ukuhweba okungahleliwe ngokuphelele. Futhi uma sekwephuze kakhulu, ubeka engcupheni yokukhipha i-chunk kwi-akhawunti yakho kusukela ekubambezelweni, nasekufakiwe okungalungile.
I-News Action trader EA ihlangene kakhulu nedatha yokuhumusha nokuhweba ngesikhathi ukuze uqiniseke ukuthi ukuhweba kudalwa yizindaba ngesikhathi esifanele, futhi kuvaliwe ngesikhathi esifanele ukukhiya inzuzo, ugweme ukulahleka okukhulu, futhi uqinisekise ukuphepha kwe-akhawunti. Konke kwenziwa ngokuzenzakalela ngejubane elisheshayo nelicashile.
I-News Action trader EA - Iseluleki Esizuzisayo Sezohwebo Ukuhweba Ngezindaba
Uke wezwa ngakho "Ukuhweba izindaba" ngaphambili? Ukuhweba izindaba kuyindlela yokuhweba ngamanani, zezimali namanye amathuluzi ezezimali ezimakethe zezimali. Ukukhishwa kwezindaba zokuhweba kungaba yithuluzi elibalulekile labatshalizimali bezimali. Imibiko yezindaba zezomnotho ivame ukukhuthaza ukuhamba kwesikhashana ezimakethe, okungadala amathuba okuhweba kubathengisi.
I-News Action trader EA is a ngokuzenzekelayo ngokuzenzekelayo uhlelo lokuhweba lwe-forex okufakazelwe ukuthi lusebenza eminyakeni edlule ye-2 futhi luzoqhubeka luphumelela iminyaka eminingi ezayo.
Isizathu sokuthi sikwazi ukuphumelela ngokungafani nezinye izinhlelo zokuhweba kungenxa yokuthi ...
Iyakwenza HHAYI sebenzisa igridi eyingozi noma izindlela ze-martingale.
Iyakwenza HHAYI ukuhweba ngokumelene nemikhuba.
I-News Action trader EA isebenza ngamabili amaningi wemali (ngokukhetha I-AUDJPY, i-AUDUSD, i-GBPUSD, i-NZSDUSD, i-USDCAD futhi XAUUSD) ngezikhathi eziningi zemakethe.
Nakhu okudingeka wazi mayelana I-News Action trader EA:
I-100% izenzekelayo ngokuzenzekelayo kusukela ekuvuleni, ekuphatheni, nokuvala amathenda.
Njalo ihlonipha imithetho eyisisekelo yemakethe ehambisana njalo kusukela ekuqaleni kokuhweba.
Oqalayo onobungane futhi kulula ukusetha kubantu abanokuhlangenwe nakho okuhlangene nobuchwepheshe.
Lokhu Forex Robot ihlolwe ngokuphelele ngokusebenzisa ama-akhawunti wangempela wokuhweba okubukhoma ngesikhathi se-Brexit.
Isu I-FIFO Iyavumelana, Akukho ukuKhishwa, futhi iyahambisana nawo wonke ama-akhawunti.
I-News Action trader EA yasungulwa i team uchwepheshe abadayisi abafuna ukukubona aphumelele!
Yenza ukusetshenziswa I-News Action trader EA bese ziphenduka utshalomali yakho ibe GOLD!
imali Easy singenzi lutho yilokhu I-News Action trader EA konke okuphathelene. Ngemuva kwemingcele, izilinganiso kanye nemikhawulo yokuthengiselana kwakho inikezwe nguwe, i-Robot ithatha futhi isebenze yonke imisebenzi yakho. Lokhu kukuvumela ukuthi uthathe ukulawula ngenkathi ugxila amandla akho kwezinye izinto ezibalulekile kanye.
I-Expert Advisor ihlala futhi isebenze i-24 / 5 ifuna amathuba okushintshanisa inzuzo. Ngakho-ke ngaphandle uma uyivala, ngeke uphethwe yohwebo olulodwa lokuhweba olukhokhelwayo.
Ngokungafani nathi njengabantu, I-News Action trader EA ingenakho ukungazinzi ngokomzwelo futhi izosebenza kuphela endaweni ebalalayo ngokuphelele.
I-News Action trader EA isebenza ngamahora athile, ihlaziya bese inquma izehlakalo zezindaba ezizayo amahora noma izinsuku ezimbalwa ezizayo. Ngaphezu kwalokho, lo meluleki onguchwepheshe uyakuvumela ukuthi uhwebe ngobungozi obucacisiwe kanye nenzuzo efiselekayo. Uhlelo lokuhweba luzuza inzuzo enkulu futhi luvule ukuhweba cishe nsuku zonke.
Lokhu FX Robot uhweba kuzo zonke izinkampani ezimbili. Kusukela esihlangothini sethu sincoma ukusebenzisa I-AUDJPY, i-AUDUSD, i-GBPUSD, i-NZSDUSD, i-USDCAD futhi XAUUSD (Igolide) kuphela.
Sincoma kakhulu ama-akhawunti we-ECN eqiniso AmaMakethe we-IC, i-ThinkForex, noma i-FX Choice (yabathengisi base-US) enezinga elincane le-akhawunti ye-$ 200.
Ezindaweni zamalungu kufanele usebenzise isoftware yeNews Action trader usebenzisa inkinobho yokuxhumanisa i-activate Now. Lokhu kuzokuvumela ukuthi usethe inombolo ye-akhawunti. Ungakhathazeki ukuthi ungabuya ekhasini noma nini bese uyisebenzisa futhi uma udinga ukushintsha ama-akhawunti.
Ingozi ezenzakalelayo isethwe ku-1% max esele. Yinani lokulondolozwa, akunconywa ukusetha okukhulu kunenani le-2% lokukhula okuzinzile okuphephile.
I-News Action trader EA - Ithuluzi Lokuhweba Okuwukuphela Kwalo Udinga Ukuphumelela
Kukhona amathuba lifiphele kakhulu yokuhluleka nge I-News Action trader EA ngoba abadali bale software yokuhweba baqinisekise a ezingaphezu kuka 70% impumelelo rate futhi uyophinde uhlinzeke imiphumela abaqinisekisiwe.
Inqubomgomo Yokubuyiselwa: Kubalulekile kithi ukuthi unqume ukuthi ngabe i-EA lena ilungele wena. Kungakho sicela abathengisi ukuthi bafake isiqinisekiso sokubuyiselwa imali semini se-30 sosuku nganoma yisiphi isizathu.
I-News Action trader EA itholakala ngokushesha ngentengo kungakholeki, ie kuphela $ 347. Ngakho ungalindi ukuba adonse ikhophi yakho!
Vakashela iwebhusayithi ye-Official News Action trader EA
izinhlelo zokuhweba zesikhathi sangempela
Uhlelo Lokuhweba Olula
I-NEWS ACTION TRADER EA - ISIQINISEKISO SOKUTHENGA KWEMPAHLA YOKUTHENGA IZINDLELA ZOKUTHENGA IZITOLO: + I-5.3% ISOLEZELA INYANGA NGONYAKA (I-AKHAWANI YEMALI YANGEMPELA!) Umthengisi we-Forex othandekayo, IZINDABA! Izindaba Zomthengisi we-EA ukubuyekeza - Iseluleki Esisha Esizuzisayo Sokuhweba Ngezindaba Thola imininingwane engaphezulu namabhonasi lapha: https://www.bestforexeas.com/news-action-trader-ea-review/ Izindaba Zomthengisi we-EA zinamandla kakhulu futhi zithembekile Umeluleki we-FX Isazi kanye nohlelo lokuzenzisa oluphelele lwezindaba olwenziwe umhwebi osezingeni eliphezulu uMikhail Zaprudin. UMikhail wayevame ukuba ngunjiniyela owathuthukisa izindlela zokuhweba zesikhathi sangempela ezithembeke kakhulu zeziteshi zamandla cishe iminyaka ye-5. Uye wenza abacebisi abahlukahlukene beMetatrader 4 (MT4)... Funda kabanzi "
IZENZO ZOKUTHENGA IZINDABA I-EA - IZIQINISEKISO ZOKUSIZA UKUTHOLA Umthengisi we-Forex othandekayo! Lezi zincomo ezilandelayo ukukusiza ekutholeni ulwazi olungcono kakhulu futhi olunenzuzo kakhulu ngokusebenzisa kwakho le software nokuhweba nge-Forex uwonke. Thola imininingwane eminingi nge-News Action trader EA lapha: https://www.bestforexeas.com/news-action-trader-ea-review/ Sicela ucabangele ukulandela lezi zincomo njengoba sizibukezile futhi sazisebenzisa iminyaka ngempumelelo kufaka phakathi amanye amakhulu abanye abathengisi esisebenza nabo. I-1) Yikuphi i-Forex Broker okufanele Uyisebenzise? I-Akhawunti ye-ECN / NDD enamakhomishini anconyiwe, isib. Izimakethe ze-IC Thola imininingwane engaphezulu lapha: https://www.bestforexeas.com/ic-markets-review/ Ngemuva kokubhalisela eyodwa... Funda kabanzi "